Hamafiso ny AMD AMD output - Tsy azo ampiasaina
AMD HDMI Output dia ny anaran'ny fifandraisana amin'ny feo amin'ny alalan'ny HDMI amin'ny TV raha ny ordinatera dia mifototra amin'ny processeur core sy AMD processeur. Indraindray ao amin'ny sehatra fanaraha-maso audio ao amin'ny Windows, dia hitanao fa tsy mifandray io safidy io, izay misakana ny fandefasana feo tsy miangona amin'ny fahitalavitra na ovay amin'ny solosaina.
Inona ny kabone HDMI?
Saika ny teknolojia maoderina, mifantoka amin'ny asa amin'ny lahatsary sy feo, dia omena amin'ny connecteur HDMI. Mba tsy hifaneraserana amin'ity tranga ity dia tsy afaka manao izany raha tsy misy ny cable. Momba ny maha-izy azy sy ny antony ilana azy, dia hiteny amin'ny lahatsoratra anio isika. About the interface The abbreviation HDMI stands for High Definition Multimedia Interface, which means "interface for high definition media."
Fampitahana HDMI sy DisplayPort
HDMI no sehatra malaza indrindra amin'ny famindrana rakitra dizitaly avy amin'ny solosaina ho an'ny monitor na TV. Izy io dia natsangana ho an'ny laptop rehetra sy ny solosaina rehetra, ny fahitalavitra, ny fanaraha-maso ary ny fitaovana finday. Saingy manana mpifaninana tsy dia malaza izy - DisplayPort, izay, araka ny hevitr'ireo mpandrindra, dia afaka mampiseho sary avo lenta kokoa amin'ny fifandraisana mifandray.
Mampifandray ny PS3 amin'ny solosaina amin'ny alalan'ny HDMI
Ny Console an'ny Sony PlayStation 3 dia manana port HDMI amin'ny endriny, izay ahafahanao mampifandray ny console amin'ny rindran-damba manokana mankany amin'ny fahitalavitra na mpanara-maso ny famoahana sary sy feo, raha manana fitaovana ilaina ny fitaovana. Laptops koa manana port HDMI, fa maro ny mpampiasa manana olana amin'ny fifandraisana.
Mamaha olana amin'ny adapter HDMI-VGA tsy miasa
Matetika ny mpiserasera amin'ny fanaraha-maso efa tranainy dia miatrika tsy fahampian'ny fifandraisana dizitaly amin'ny endrika karatra video. Amin'ity tranga ity dia misy vahaolana tokana ihany - ny fampiasana ny adapter manokana sy ny converter. Ny tena fahamarinan'ny asany dia miankina amin'ny modely amin'ny karatra video, ny monitor ary ny kalitaon'ny fitaovana.
Atsaharo ny feo ao amin'ny fahitalavitra amin'ny HDMI
Ny dikan-teny farany amin'ny HDMI cable an'ny ARC teknôlôjia, izay ahafahana mandefa ny horonan-tsary sy audio ho an'ny fitaovana hafa. Saingy misy mpampiasa maro amin'ny fitaovana misy seranan-tsambo HDMI no miatrika olana iray rehefa ny feo dia tsy avy amin'ny fitaovana iray izay mandefa famantarana, ohatra, ny solosaina finday, fa tsy misy feo avy amin'ny fandraisana (TV).
Inona ny cables HDMI
Ny fitaovana multimedia interface avo lenta (interface ho an'ny famoaham-pehezanteny avo lenta) dia matetika hita amin'ny fitaovana isan-karazany. Ny fialan-tsasatra amin'io anarana io dia fanta-daza sy miely hidera HDMI, izay de facto no fitsipika mifandray amin'ny fitaovana multimedia izay manohana ny famoahana sary avo lenta (avy amin'ny FullHD sy ambony).
Mifidiana cable cable HDMI
HDMI dia teknolojia mirakitra fampitàm-baovao nomerika izay novana ho sary, lahatsary ary feo. Ny androany no safidy iraisam-peo mahazatra ary ampiasaina amin'ny ankamaroan'ny informatika, izay misy ny famoahana horonantsary - avy amin'ny smartphones ho an'ny solosaina manokana.
Mamaha ny olana amin'ny feo malefaka amin'ny fahitalavitra amin'ny HDMI izahay
Ny mpampiasa sasany dia mampifandray ordinatera na ordinatera amin'ny fahitalavitra mba hampiasana azy amin'ny maha-monitor. Indraindray dia misy olana amin'ny filalaovana feo amin'ny alalan'ny fifandraisana toy izany. Ny antony mahatonga ny olana toy izany dia mety ho maromaro ary noho ny tsy fahombiazany na ny tsy fetezan'ny feo amin'ny rafitra miasa.
Nahoana ianao no mila HDMI-connector amin'ny TV
Ao amin'ny fahitalavitra maoderina, ny tombam-bidin'ny salan-tsolika sy ambony, ary indraindray modely amin'ny budget, ny mpampiasa dia afaka mahita vokatra maromaro amin'ny interfaces isan-karazany. Matetika dia eo foana ny HDMI, iray na maromaro. Amin'io lafiny io, maro ny olona liana amin'ny zavatra azo ifandraisana amin'io connector io sy ny fomba hanaovana izany.
DVI sy HDMI Comparison
Mba hampifandraisana ny monitor amin'ny solosaina, ampiasaina manokana ny connectors, izay lany tamin'ny rindrankajy na hita eo amin'ny karatra video, ary ireo cable manokana izay mifanaraka amin'ireo connectors ireo. Iray amin'ireo karazana seranana malaza amin'izao fotoana izao ny fampisehoana ny fampahalalam-baovao nomerika amin'ny solosaina amin'ny solosaina dia DVI.
Inona no atao raha tsy mampifandray amin'ny fahitalavitra amin'ny alalan'ny HDMI ny solosaina finday?
Mampifandray laptop ho an'ny TV miaraka amin'ny HDMI-interface, ny mpampiasa sasany dia tsy mahomby. Matetika dia tsy misy sary na feon-kira mandeha amin'ny TV, ary misy antony maromaro amin'izany. Amin'ny ankapobeny dia azo fongana tsy misy fahasarotana izy ireo, manaraka ny soso-kevitra etsy ambany. Ny solosaina tsy misy ifandraisany amin'ny fahitalavitra amin'ny HDMI Connected amin'ny HDMI dia iray amin'ireo malaza amin'izao fotoana izao satria izy io dia mamela anao hampita ny feo sy ny sary amin'ny kalitaony tsara ary azo itokisana araka izay azo atao.
Ahoana no fomba ahafahan'ny HDMI amin'ny solosaina finday?
Miaraka amin'ny fanampian'ny fifandraisana HDMI, ny tambajotra multimedia dia omena amin'ny kalitao tsara sy haingam-pandeha. Ny famindrana fampitaovana dia atao amin'ny alalan'ny telegrama manokana mifandray amin'ny fitaovana roa na mihoatra. HDMI no endrika malaza nomerika malaza ary nosoloina ny alika taloha.
Mampifandray ny ordinatera amin'ny fahitalavitra amin'ny HDMI izahay
Ny interface HDMI dia mamela anao handefa feo sy horonan-tsary avy amin'ny fitaovana iray ho an'ny hafa. Amin'ny ankabeazan'ny tranga, ho an'ny fampifandraisana fitaovana, dia ampy ny mampifandray azy ireo amin'ny fampiasana cable cable HDMI. Saingy tsy misy olona tsy manana hery amin'ny fahasarotana. Soa ihany fa ny ankamaroan'izy ireo dia afaka mivaha haingana sy mora foana amin'ny tenanao. Fampahalalana fampidiram-pejy Voalohany, ataovy azo antoka fa ny connectors amin'ny solosaina sy ny TV dia dika mitovy sy karazana.
TV tsy mahita ny ordinatera amin'ny HDMI
HDMI dia fifandraisana malaza amin'ny fifandraisana amin'ny fitaovana isan-karazany (ohatra, ny solosaina sy ny fahitalavitra). Saingy rehefa mampifandray, dia mety hipoitra isan-karazany ny zava-manahirana - teknika sy / na rindrambaiko. Ny sasany amin'izy ireo dia afaka mivaha tsy miankina, mba hanafoanana ny hafa dia mety ilaina ny hanamboarana ny fitaovana na hanoloana ny tariby mahatsiravina.
Mampiasa solosaina finday ho solosaina ho an'ny ordinatera izahay
Raha mila mampifandray fahitalavitra faharoa amin'ny ordinatera iray ianao, saingy tsy misy izany, dia misy safidy ny fampiasana solosaina ho fampirimana PC. Ity dingana ity dia natao amin'ny fampiasana tariby iray tokana ary fametrahana kely ny rafitra miasa. Andeha hojerentsika amin'ny antsipiriany bebe kokoa. Mampifandray ny solosaina amin'ny ordinatera amin'ny HDMI izahay. Mba hanatanterahana io dingana io dia mila ordinatera miaraka amin'ny monitor ianao, cable sy HDMI.
Fampitahana ny fifandraisana VGA sy HDMI
Mpiserasera marobe no mihevitra fa ny kalitao sy ny fandaminana ny sary aseho eo amin'ny seho dia miankina amin'ny solosaina voafidy sy ny herin'ny PC. Ity hevitra ity dia tsy marina tanteraka. Ny anjara asany manan-danja koa dia asehon'ny karazana fampifandraisana mavitrika ary ny tariby tafiditra. Efa misy lahatsoratra roa ao amin'ny tranokalantsika mampitaha ny fifandraisana amin'ny HDMI, DVI ary DisplayPort.
Ahoana raha tsy miasa amin'ny solosaina finday ny HDMI?
Ny seranana HDMI dia ampiasaina amin'ny alàlan'ny teknolojia maoderina rehetra - solosaina, televiziona, takelaka, ordinatera fiara, ary na dia smartphones aza. Ireo port ireto dia manana tombony amin'ny fifandraisana maro toy izany (DVI, VGA) - HDMI dia afaka mandefa feo sy horonan-tsary amin'ny fotoana iray ihany, manohana ny fifandraisana avo lenta, dia mendri-piderana kokoa, sy ny sisa.
Mampifandray PS4 amin'ny laptop amin'ny HDMI
Ankehitriny ny PS4 dia tsy ny solosaina afa-tsy ny tanjaka, fa mitarika ny tsena ihany koa izy io, ary mamely tsikelikely ny mpifaninana rehetra. Ho azy, maro ireo exclusives dia novokarina isan-taona, izay manosika ny tombontsoan'ny mpiserasera ary mametraka ara-bakiteny ny mpividy PS4 afa-tsy ny hilalao ny lalao.
Mampifanaraka ny solosaina PS4 amin'ny solosaina tsy misy HDMI
Mampalahelo fa tsy ny mpampiasa rehetra no afaka manova ny tanjon'izy ireo, ka maro no mbola miara-miasa amin'ny olona efa misy, izay efa somary efa ela loatra ny toetrany. Ny tsy fahampian'ny fitaovana efa taloha dia ny tsy fisian'ny connecteur HDMI, izay indraindray manaitra ny fifandraisana amin'ny fitaovana sasany, anisan'izany ny PS4.
https://termotools.com mg.termotools.com © HDMI 2019